သာသနာတော်နဲ့ တွေ့ရကျိုးနပ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်အောင် - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ရေးသားသူလှိုင်ကျော်ထွေး on ဇွန် 10, 2011 at 6:43pm in ဆွေးနွေးခြင်း
ကျနော်တို့တတွေ အခုလို့သာသနာတော် ထွန်းလင်းနေဆဲကာလမှာ လူလာဖြစ်ရတာ(သို့)ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နဲ့ လာကြုံတွေ့ရာ၌ မိမိကိုယ်မိမိ သာသနာတော်နဲ့ တွေ့ရကျိုးနပ်တယ်လို့ ခံယူနိုင်အောင် မည်သည့်ကုသိုလ်အလုပ်တွေ ဖြည့်ကျင့်အားထုတ်ဘို့ လိုအပ်သည်ဟု ယူဆထားပါသလဲ.....?
အားလုံးသောမိတ်ဆွေများ... မိမိအမြင်(ခံယူချက်)များကို....ပြောဆိုဆွေးနွေးကြပါနော်.......။ လေးစားစွာဖြင့်....။
Permalink Nyi Nyi Naing သည် ဇွန် 11, 2011 12:38amအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
ကျွန်တော်အမြင်အရတော. သာသနာနဲ.တွေ.တုံး စာတွေ.ကောလက်တွေ.ပါ ရနိုင်သလောက်လေ့လာသင်ယူ၊လိုက်နာကျင်.သုံးသင်.တယ်။သိရုံနဲ. ရပ်မနေသင်.ဘူး၊လက်တွေ.
နိုင်ရမယ်။ဒဒီဘ၀မှစပြီး နိဗ္ဗာန် ကို တစ်နေ.တစ်လံ ပုဂံ ဘယ်ရွေ.ဆိုသလို နောက်မဆုတ်တမ်း..။
Permalink လှိုင်ကျော်ထွေး သည် ဇွန် 12, 2011 2:43pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
ကျတော်တို့တတွေ သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တုံး အနည်းဆုံးလက်ရှိအနေအထားထက် တစ်ဆင့်မြင်အောင် တက်လှမ်းနိုင်ရပါမယ်..။
Permalink saungyanant7 သည် ဒီဇင်ဘာ 2, 2011 3:13pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
သာသနာတော်နဲ့မကြုံတဲ့အခါမှာလှူတာတန်းတာက အစမတူတော့ဘူးလေ။ အဲဒါကြောင့်သာသနာပမှာလှူရင် ဘယ်လောက်ပဲထမင်းရည်ချောင်းစီးလှူတာတောင် ကုသိုလ်ရပုံချင်းကွာတယ်လို့ ဆရာတော်တစ်ပါးဟောပြောဘူးတာနားကြားရဘူးပါတယ်။
ဒါကြောင့်သာသနာနဲ့ကြုံကြိုက်တုန်းမှာလှူတာတန်းတာ ဒါနပြုတာတွေလုပ်တဲ့အပြင် ၀ိပဿနာပါ တွဲပြီးလုပ်ရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။သာသနာပမှာဆိုရင် ကိုယ့်ကိုသိမြင်အောင်ဟောပြောညွှန်ပြပေးမယ့်ဆရာတော်သံဃာတော်တွေမရှိတဲ့အခါမှာ ဒီအလုပ်တွေကိုသိမြင်မယ်လို့ယုံကြည်လို့မရပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ဒါနလုပ်ဖို့၊ သီလဆောက်တည်ဖို့အကြောင်းအရာတွေ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ထင်မြင်မိပါတယ်။
Permalink 3dbmlstm83p1y သည် ဇွန် 12, 2011 11:01pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
မည်သည့်ကုသိုလ်ဆိုပြီး ခွဲခြားနေဘို့လိုမယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ ကုသိုလ်မှန်ရင် လုပ်သင့်တာချည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သာသနာနဲ့တွေ့ရကျိုးနပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ၀ိပဿနာကုသိုလ်ကို အားထုတ်သင့်တယ်လိုယူဆပါတယ်။ အဲဒီအတိုင်းလည်းခံယူထားပါတယ်။ ကျန်တဲ့ပေးကမ်းတာတွေ စောင့်ထိန်းတာတွေက သာသနာမရှိလည်းလုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ သမထလို့ခေါ်တဲ့ သမာဓိထူထောင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တောင် သာသနာ မရှိလည်း ရနိုင်တယ်လို့ပြောတာကြားဖူးပါတယ်ပါတယ်။
Permalink လှိုင်ကျော်ထွေး သည် ဇွန် 13, 2011 12:24pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့...သာဓု-သာဓု-သာဓု ပါဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါ၏။
Permalink hla moe 24 သည် ဒီဇင်ဘာ 2, 2011 5:06pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
ဝိပသနာ နှင့်နေနိုင်လျှင် အကောင်းဆုံးပါ....အရာတခုကို ပုံမှန်လုပ်နေပါက ကြာလာလျှင် ညောင်းလာတတ်ပါတယ်...
အဲ့ဒီအခါမှာ မေတ္တာနဲ့ တလှည့်..ဂုဏ်တော်ဖြင့်တလှည့် ..နေရင်တော့ ပိုကောင်းပေါ့..မေတ္တာဆိုရာဝယ် အရမ်းဘဲးနက်
ရှိုင်းပါတယ် ကိုယ်ကကောင်းအောင် ဘယ်လောက်ပဲး လုပ်ပေး လုပ်ပေး ဘယ်လိုမှအကောင်း မမြင်တဲ့သူကို ကြုံဘူးကြ
မှာပါ အဲ့ဒီအခါမှာ ဝဠ်ကြွေးပေးဆပ်တယ် ဆိုပြီးဖြေနိုင်မယ်ဆို ကောင်းပါပြီ.....ဘုံကံ ကြီးမားကြလို့ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ကြုံ
တုန်းမှာ ဘုရားစကားနားထောင် နိုင်ကြပါစေ....
Permalink ကျော်ကို သည် ဇန်န၀ါရီ 4, 2012 6:28pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
၀ိပဿနာတရား မှ တပါး အခြားမရှိပါ အကို...
Permalink ကိုကျော်သန်း သည်ှဧပြီ 8, 2013 10:39pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
မှန်လိုက်တဲ့ စကား ဟူတ်ပါပေ့
Permalink 1y31nso5x7bsz သည် ဇန်န၀ါရီ 7, 2012 1:51amအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
Permalink ♣တောသူမလေး♣ သည် ဇန်န၀ါရီ 11, 2012 2:53pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
အခုလို့သာသနာတော် ထွန်းလင်းနေဆဲကာလမှာ လူလာဖြစ်ရတာ(သို့)ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နဲ့ လာကြုံတွေ့ရာ၌ မိမိကိုယ်မိမိ သာသနာတော်နဲ့ တွေ့ရကျိုးနပ်တယ်လို့ ခံယူနိုင်အောင် ခန္ဓာငါးပါး၏ အဖြစ်အပျက်ကိုမမြင်ဘဲ အနှစ်တစ်ရာ အသက်ရှင်နေရခြင်းထက်၊ ခန္ဓာငါးပါး၏ အဖြစ်အပျက်ကို ၀ိပဿနာဉာဏ်ဖြင့် ရူမြင်သောသူ၏ တစ်ရက်မျှ အသက်ရှင်ခြင်းက ပို၍ မြတ်သလို ဘုရားသာသနာနှင့် ကြုံရခိုက်၊ လူ့ဘ၀ရခိုက်၊ လူသားအားလုံး ဘုရားတရားတော်နဲ့အညီ ကျင့်ကြံနေထိုင်ခြင်း၊ အခြားသောသူများအား မိမိကဲ့သို့ တရားအားထုတ်ဖို့ ပြောဆို လမ်းပြ တိုက်တွန်းခြင်းဖြင့် အခွင့်သာခိုက် အမြတ်ဆုံး အသက်ရှည်နည်းကို မိမိသိရှိသလောက် တစ်ပါးသူများအားလည်း ပြန်လည်ပြောဆို မျှဝေ လမ်းပြပေး၍ အများအကျိုး သာသနာအကျိုး သယ်ပိုးခြင်းဖြင့် သာသနာတော်နှင့်တွေ့ရကျိုးနပ်စေမယ်လို့ ခံယူမိပါတယ်ရှင်။
Permalink hanmin420 သည် ဖေဖော်ဝါရီ 21, 2012 7:40pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
ဒီစာလေးကို ကျွန်တော် တော်တော်ကြိုက်သွားပြီဗျာ။
သီလမြဲ ၀ိပသနာစွဲ သံသရာမှ လွတ်စမြဲ ကောင်းလိုက်တာဗျာ။
Permalink ဦးခင် သည် ဖေဖော်ဝါရီ 2, 2012 3:02pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
ကျနော်တို့တတွေ အခုလို့သာသနာတော် ထွန်းလင်းနေဆဲကာလမှာ လူလာဖြစ်ရတာ(သို့)ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နဲ့ လာကြုံတွေ့ရာ၌ မိမိကိုယ် မိမိ သာသနာတော်နဲ့ တွေ့ရကျိုးနပ်တယ်လို့ ခံယူနိုင်အောင် ကျင့်ကြံမှုဖြစ်တဲ့ ဝိပဿနာ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်ဖို့အဓိကကျပါတယ်။ အကျင့်မှန်မှ အ သိမှန်မယ် အသိမှန်မှ ကုသိုလ်အကုသိုလ် နားလည်မယ် နောက်လေးနက်တဲ့အလုပ်တွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။